भारतीय खेलमैदानबाटै बालेनलाई दिए बधाई को हुन त उनीहरू ? – Ap Nepal
विराटनगर, ११ जेठ । इन्डीयन प्रीमियर लिग (आइपीएल) हेर्न भारत पुगेका विराटनगरका खेलप्रेमी युवाहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन साहलाई स्टेडियमबाटै बधाई दिएका छन् ।
आज भारतको कलकत्तास्थित इडेन गार्डेन स्टेडियममा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर र लखनउ सुपर गार्डेनबिचको खेल हेर्न पुगेका विराटनगरका युवाहरुले स्टेडियमबाटै बालेनलाई बधाई दिएका छन् ।
खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको समयमा विराटनगरका युवाहरु अभिषेश शर्मा, जाइद इराकी, विशाल ढकाल र दिपक पासवानले ‘बधाई छ बालेन साह’ लेखेर बधाई दिएका हुन् ।
स्टेडियमबाट बालेनलाई बधाई दिँदै गरेको तस्बीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।-हाम्रोबिराटनगरबाट।
त्यस्तै धरानका नवनियुक्त मेयर हर्क साम्पाङ बधाई तथा शुभकामनाको अबिर मेट्न नपाउदै मेयर हर्क साम्पाङ खानेपानी मुहानमा पुगेको छ । देशभरका अधिकांश मेयरहरु जितको खुशियाली मनाइरहँदा साम्पाङ भने फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेका छन् ।
Prevनिर्वाचनमा पार्टी हार्नुको कारणबारे बोले ओली गरे यस्तो खुलासा…
Nextधरानका मेयरले यसरी झाडु बोकेर भानु चौकमा उत्रिए , यो देखेर सबैले गरे तारिफ (भिडियो सहित)
सबैकी प्यारी बिनिताको घाँटीमा के भयो यस्तो ? अस्पताल लग्ने योजना- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)